Valin'i Afrika Atsimo amin'ny fameperana fitsangatsanganana vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo » Valin'i Afrika Atsimo amin'ny fameperana fitsangatsanganana vaovao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Safety • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Valin'i Afrika Atsimo amin'ny famerana ny dia
Ny governemanta Afrikana Tatsimo dia nanamarika ny fanambaran'ny firenena maromaro hametraka fameperana tsy maharitra any Afrika Atsimo sy ireo firenena hafa ao amin'ny faritra.
Manaraka ny fahitana ny ny variana Omicron vaovao.
Afrika Atsimo dia mampifanaraka ny tenany amin'ny toeran'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana momba ny fandrarana ny dia farany.
Ny Fikambanana Iraisam- dia niangavy ireo mpitondra eran'izao tontolo izao mba tsy handray anjara amin'ny fanehoan-kevitry ny lohalika ary nampitandrina ny amin'ny fametrahana fameperana ny dia.
Dr. Michael Ryan (OMS Lehiben'ny vonjy taitra) dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fiandrasana hahita izay haseho ny angon-drakitra.
“Hitantsika tamin'ny lasa, ny minitra izay misy karazana fiovaovana rehetra ary manidy sisintany ny rehetra ary mametra ny dia. Tena zava-dehibe ny fisokafantsika, ary hifantoka hatrany, ”hoy i Ryan.
Marihina fa misy variana vaovao hita any amin'ny firenena hafa. Ny tsirairay amin'ireo tranga ireo dia tsy nisy fifandraisana vao haingana tamin'i Afrika Atsimo. Tsara ny manamarika fa hafa tanteraka ny fihetsik'ireo firenena ireo amin'ny tranga any atsimon'i Afrika.
Ity fihodinana farany amin'ny fandrarana fitsangatsanganana ity dia mitovy amin'ny fanasaziana an'i Afrika Atsimo noho ny filaharan'ny génomika mandroso sy ny fahafahana mamantatra ireo variana vaovao haingana kokoa. Ny siansa tena tsara dia tokony tehaka fa tsy saziana. Mila fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa amin'ny fitantanana ny valan'aretina COVID-19 ny vondrom-piarahamonina manerantany.
Ny fampifangaroana ny fahaizan'i Afrika Atsimo amin'ny fitsapana sy ny programa vaksiny natomboka, tohanan'ny vondrom-piarahamonina siantifika manerantany, dia tokony hanome fampiononana ho an'ireo mpiara-miombon'antoka maneran-tany izay ataontsika sy amin'ny fitantanana ny valan'aretina. Afrika Atsimo dia manaraka sy mampihatra ny protocole ara-pahasalamana COVID-19 eken'izao tontolo izao amin'ny dia. Tsy misy olona voan'ny aretina mahazo mivoaka ny firenena.
Hoy ny minisitra Naledi Pandor: “Na dia manaja ny zon'ny firenena rehetra aza izahay handray ny fepetra ilaina amin'ny fiarovana ny olom-pireneny, dia tokony hotadidintsika fa mitaky fiaraha-miasa sy fizarana fahaiza-manao ity areti-mifindra ity. Ny ahiahinay avy hatrany dia ny fahasimbana aterak'ireo fameperana ireo amin'ny fianakaviana, ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany ary ny orinasa. ”
Efa nanomboka nifandray tamin'ireo firenena nametraka fandrarana ny fivezivezena i Afrika Atsimo mba handresena lahatra azy ireo handinika indray.